Apple TV + kaliya waxay ku leedahay 3% saamiga suuqa Mareykanka | Waxaan ka socdaa mac
Kadib markaan maqlay warka sheegaya in Apple ay kordhinayso lacag la’aanta sanadka ee Apple TV + Ilaa JulaayUma baahnid inaad caqli badan tahay inaad ka fikirto in barnaamijka fiidiyowgu uusan ku yeelanayn saameynta laga filayo macaamiisha telefishanka.
Eebbe iyo gargaar (iyo malaayiin doollar oo fara badan) ayaa kugu kici doona Apple TV + Ka hel meel ka mid ah meheradaha waaweyn ee qaybta. Waa su'aal kaliya oo ah bixinta telefishanka. Mashruuca Disney + waxaa la bilaabay Apple ka dib, wuxuuna leeyahay shan laab ka sarreeya suuqa. Laakiin marka la eego dadaalka iyo lacagta ay gelinayaan Cupertino, waa waqti uun ka hor inta Apple TV + aanu ku dambayn inuu helo aqbal ballaadhan dadweynaha telefishanka.
Toddobaad kasta waxaan haynaa warar ku saabsan mashaariicda cusub ee telefishanka ee Apple TV + qandaraas ku qaatay, ama bilaabay duubista, ama soo bandhigiisa dhow, xitaa xilliyada labaad, sida taxanaha Dickinsonama adeegaya, inaan siiyo laba tusaale.
Weli, madashu wali wey ka fog tahay in loo tixgeliyo guul weyn. Baadhitaan cusub oo ku saabsan JustWatch wuxuu sharxayaa in Apple TV + kaliya ay yeelatay 3% saamiga suuqa rubuca afaraad ee 2020 gudaha Mareykanka, iyadoo aad uga dambeysa barnaamijyada kale sida Netflix, HBO o Disney +.
JustWatch, oo ah shirkad u heellan falanqaynta qulqulka barnaamijyada fiidiyowga, ayaa maanta daabacday maqaal xiiso leh oo ku saabsan saamiga suuqa ee qulqulka adeegyada fiidiyowga ee Maraykanka. Baadhitaanku wuxuu ku saleysan yahay xog la ururiyey intii lagu jiray rubucii ugu dambeeyay ee 2020, oo tixgeli barnaamijyada ugu caansan ee laga heli karo Mareykanka.
Sidii la filayay, Apple TV + ma ahayn barxada ugu caansan rubuca, laakiin waa kii ugu dambeeyay ee qiimeynta leh saamiga suuqa ee kaliya 3% gudaha Mareykanka Apple TV + xitaa wuxuu ka dambeeyaa Peacock, NBC Universal oo ah adeegga soo dejinta ee la soo saaray bishii Luulyo ee sanadkii hore, kaasoo soo daabacay 6% saamiga suuqa intii lagu jiray rubuckaas.
Netflix, hoggaamiyaha aan muran ka taagnayn
Netflix wuxuu sii ahaanayaa hogaamiyaha barnaamijyada qulqulka ee Mareykanka oo leh a 31%, laakiin Amazon Prime Video ayaa sii kordheysay kuna soo dhowaaneysay 22%. Hulu ayaa ku soo xigta oo leh 14% iyo Disney + oo leh 13%, waxaa ku xiga HBO Max oo leh 9% saamiga suuqa.
Maskaxda ku hay in labadaba Peacock, HBO Max y Disney + Waxaa la bilaabay kadib Apple TV +, tiradooduna waa ka badan tahay wax la aqbali karo, iyadoo la tixgelinayo tartanka weyn ee qaybta. Waa su'aal kaliya oo ah bixinta telefishanka. Qofna shaki kama qabo tayada waxyaabaha ku jira Apple TV +, laakiin dhab ahaan waa sii gabaabsi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Apple TV + kaliya waxay leedahay 3% saamiga suuqa Mareykanka.
Tim Cook wuxuu hadiyad u siiyay Donald Trump Mac Pro-kii ugu horreeyay ee lagu sameeyo Ameerika sanadka 2019